खोइ सेनिटाइजर र सर्जिकल मास्क ? « News24 : Premium News Channel
काठमाडौं, २६ फागुन । कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा नेपाललाई राखिएपछि नेपाली बजारमा सेनिटाइजर, सर्जिकल मास्क र थर्मोमिटरको कृत्रिम अभाव सिर्जना भएकाले उपभोक्ता मारमा परेका छन् । पछिल्लो समय पसलमा सर्जिकल मास्क पाइनै छाडेको छ भने सेनिटाइजरको पनि चरम अभाव छ ।
कलंकीमा बस्दै आएका सन्देश विष्टले भने, ‘एउटा मास्कको ५० रुपैयाँ भने । के गर्नु किन्नै प¥यो †’ यस्तै, ज्वरो नाप्न प्रयोग गरिने थर्ममिटरको पनि अभाव हुन थालेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले मास्क, सेनिटाइजर र थर्ममिटरको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने गरी कसैले लुकाउनु अपराध भएको बताए । उनले भने, ‘आमनागरिकले पनि मास्कको समुचित प्रयोग गर्नुपर्छ । सरकारले तीन–चार दिनमै धेरै परिणाममा मास्क उत्पादन गर्ने तयारी गरेको छ ।’
नेपालमा तीन वटा उद्योगले सर्जिकल मास्क उत्पादन गर्दै आएको उत्पादकहरू बताउँछन्, जसमध्ये दुई कम्पनी त कच्चापदार्थ अभावमा बन्द नै भइसकेको मास्क उत्पादकको भनाइ छ । सर्जिकल मास्क उत्पादन गर्दै आएका शैलेश श्रेष्ठले भने, ‘गत आइतबारदेखि कच्चा पदार्थ नआएपछि उद्योग बन्द गरें । दैनिक रूपमा २५ हजार थान मास्क उत्पादन गर्दै आएको थिएँ ।’ यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छ ।